SpotOn sy Poynt: Marketing POS mifangaro ho an'ny orinasa madinidinika | Martech Zone
Zoma, Martsa 15, 2019 Zoma, Martsa 15, 2019 Douglas Karr
SpotOn dia efa nametraka fitaovana maherin'ny 3,000 ny varotra sy ny fikarakarana fandoavam-bola any amin'ny trano fisakafoanana, mpivarotra enta-madinika ary salons manerana ny firenena. Niara-niasa izy ireo Poynt mba hanomezana teboka miovaova amin'ireo terminal fivarotana izay ahafahan'ny mpivarotra sy ny tompona trano fisakafoanana manangona mombamomba ny fifandraisan'ny mpanjifa ary manaiky ny fandoavam-bola amin'ny kaontera, na aiza na aiza misy ny mpanjifa.
Fitaovana POS Marketing
Ny fitaovana marketing an'ny SpotOn dia manamora ny fametrahana paikady fifandraisana tsy miova amin'ny mpanjifanao mba hampiasan'izy ireo matetika ny orinasanao matetika ary handany vola bebe kokoa rehefa manao izany izy ireo. Ny vokatra farany dia tsy ny fifandraisana tsara kokoa amin'ny mpanjifanao ihany, fa ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny orinasanao.
Ny mampiavaka ny marketing sy ny tsy fivadihan'ny SpotOn dia ahitana ny fahaizana:
Manafatra mpanjifa efa misy ary manohiza mampitombo azy amin'ny fanangonana adiresy mailaka ho an'ny mpanjifa vaovao.
Mifandraisa amin'ireo mpanjifanao amin'ny alàlan'ny mailaka, Facebook, Twitter, ary fanairana finday.
Mamorona hafatra ara-barotra haingana sy mora miaraka amin'ny mpamosavy fampielezan-kevitra an-tsehatra.
Alefaso ny mpanjifanao fifampiraharahana mora tohina ara-potoana handraisana fitsidihana vaovao.
Fanentanana mandeha ho azy handrisika ny fitsidihana avy amin'ny sehatra samihafa an'ny mpanjifa, ao anatin'izany ny mpitsidika vaovao, ny mpanjifanao tsara indrindra ary ny mpanjifa izay mbola tsy nitsidika elaela.
Ny SpotOn dia tsy mahatonga ny fitantanana marketing ho mora fotsiny, fa mamela anao hamorona a koa valisoa tsy fivadihana programa, ary tantano ny anao hevitra an-tserasera. Rehefa ampiasaina miaraka amin'ny iray hafa, ireo fitaovana fampiroboroboana mpanjifa ireo dia manome ny orinasanao sehatra matanjaka iray izay mifangaro tanteraka amin'ny fizotry ny fizahana sy ny fanadihadiana an-tariby.
Ny dikan'izany dia ny fahaizana mampitombo hatrany ny lisitry ny mpanjifanao sy manangona angona momba ireo mpanjifa ireo. Satria manangona angona bebe kokoa ny sehatra SpotOn anao, dia hanjary matanjaka kokoa izy io, ahafahanao mamorona vondrona mpanjifa misy fizarana vaovao ary afaka manatona azy ireo amin'ny fampielezana varotra tonga lafatra.
Ambonin'izany, ny analytics amin'ny dashboard an'ny sehatra dia hamela anao hahita fifandraisana mazava eo amin'ny mpanjifa, ny fifampiraharahana ary ny fampielezan-kevitra amin'ny varotra, hanome anao ROI mazava ho an'ny ezaka marketing. Raha atao teny hafa, SpotOn dia mamoaka ny tombantombana amin'ny marketing. Ho fantatrao tsara izay miasa, sy ny fomba hamoronana fanentanana marketing mahomby kokoa amin'ny ho avy.
Momba ny SpotOn Transact, LLC
SpotOn Transact, LLC ("SpotOn") dia orinasa fandoavam-bola farany manaparitaka ny indostrian'ny serivisy mpivarotra. SpotOn dia manambatra ny fikirakirana ny fandoavam-bola sy ny lozisialy fifandraisan'ny mpanjifa, manome ny angon-drakitra manan-karena sy fitaovana manome hery azy ireo hivarotra am-pahombiazana kokoa ho an'ny mpanjifany. Ny sehatra SpotOn dia manolotra fitaovana feno indrindra ho an'ny orinasa madinidinika sy salantsalany, ao anatin'izany ny fandoavam-bola, ny marketing, ny hevitra, ny fanadihadiana ary ny tsy fivadihana, tohanan'ny fikarakarana mpanjifa mitarika indostria. Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana SpotOn.com.
Momba ny Poynt, Inc.
Poynt dia sehatra varotra mifandray
manome hery ny mpivarotra amin'ny teknolojia hanovana ny orinasany. Tamin'ny taona 2013, ny orinasa dia nanaiky ny tsy fisian'ny terminal marani-tsaina eny an-tsena, ary naka sary an-tsaina ny terminal fandoavam-bola hatraiza hatraiza ho lasa fitaovana mifandraika misy tanjona maro izay mitantana ny antoko fahatelo
fampiharana. Rehefa lasa be mpitia ny terminal marani-tsaina dia rafitra miasa misokatra izay afaka manome hery ny terminal fandoavam-bola manerantany ny Poynt OS, mamorona toekarena fampiharana vaovao ho an'ireo mpivarotra ary mamela ny mpamorona manoratra indray mandeha ary mizara na aiza na aiza. Poynt dia manana foibe
any Palo Alto, Calif., misy ny foibe iraisam-pirenena any Singapore, ary tohanan'ny Elavon, Google Ventures, Matrix Partners, National Australia Bank, NYCA Partners, Oak HC / FT Partners, Stanford-StartX Fund, ary Webb Investment Network. Jereo bebe kokoa amin'ny
Tags: finday fampiharanafanodinana volateboka fivarotanafandefasana hafatra amin'ny pospontpont posspoton